ceh v10 - post bvunzo kudzidza nyora kumusoro
Kuru Chengetedzo CEH v10 - Tumira Bvunzo Kudzidza Nyora kumusoro
Ini ndichangobva kutora bvunzo yeECH v10 ndikapasa. Mune ino posvo, ini ndinopfupikisa ruzivo rwangu mukutsvaga nzira yekuve Certified Ethical Hacker.
Ndinovimba, iwe uchaona ichi chinyorwa chinobatsira mukufunda, kugadzirira uye kupasa bvunzo yeECH.
Ndave ndichishanda muIT kwemakore anoda kusvika makumi maviri. Ini ndakatanga seJava Developer mune kutanga kwa2000 uye makore gumi nemashanu apfuura anga akabatikana zvakanyanya mukuyedza kushanda, bvunzo otomatiki, uye kuvimbiswa kwemhando yepamusoro.
Ini ndakatanga rwendo rweECH ndisina ruzivo rwekushamwaridzana uye neruzivo rwekuchengetedza.
Kana iwe ukandibvunza chero chinhu nezve chero chinotevera, ini ndingadai ndisina ruzivo!
CIA katatu uye nheyo dzekuchengeteka
TCP / IP Muenzaniso
Kuti macomputer munetiweki anotaura sei
Network uye Port scanning / Enumeration
Ndeapi matanho akasiyana enetiweki
Nhamba dzakakosha dzechiteshi
Network kurwiswa, MAC Mafashama, DHCP Nzara, ARP kurwisa
Kupora, Kufembedza, MitM kurwisa
Mhando dzakasiyana dze cryptography algorithms uye kusangana kwakabatana
Uye zana zana zvishandiso zvinogona kushandiswa mukubira
NMap, Wireshark, Metasploit
Uye aya anongova iwo mazano echando. Kune akawanda mamwe mazano uye nzira dzisina kunyorwa pamusoro. Iwe unogona kuona izvo kune mutsva mutsva mundima yekuchengetedza, zvinoita kunge zvinotyisa uye zvinotyisa.
Iyo Certified Ethical Hacker kosi inodhura. Ndakatora kosi yangu yeECH muLondon uye zvakabhadhara whopping £ 2000.00. Inoita kwemazuva mashanu, kubva na9 mangwanani kusvika na5 dzemanheru. Iwe unowana kugadzira rako rebhu kuti uite maekisesaizi. Iyo kosi musanganiswa wezvose zviri zviviri dzidziso uye maoko-pane maitiro, achienzanisira mhando dzakasiyana dzehunyanzvi hwekubira.
Zvakakosha kuziva kuti iyo CEH kosi yakanangana nerutivi runogumbura pane kuzvidzivirira. Ehe, iyo inotaura nezve maontrojita nematanho, asi zvakare inokudzidzisa iwe nzira yekudarika iwo ekudzora.
Tsamba yezano: zviite iwe kuti uzive nezvakakosha zve network uye chengetedzo pamberi kutora kosi yeECH.
Ini ndakatora kosi ndisingazive zvekutanga uye kazhinji, ndakanga ndisingazive zvachose. Dai ndaiziva izvo zvekutanga, zvingadai zvakandibatsira zvakanyanya kuti ndinzwisise pfungwa dzezvairatidzwa mukosi.
Kwandiri, zvaive zvakawanda nezvekudzidza pfungwa nyowani uye kuwana nzwisiso yakadzama yetekinoroji mune zvese.
Pandakafambira mberi kuburikidza nebasa rangu mukuyedza software, ndakanzwa kuti kwaive kufambira mberi kwepanyama kuenda mukuchengetedzwa uye kuyedzwa kwekupinda. Mushure mezvose, kana iwe uchida kutarisa mhando zvakakwana, unofanirwa kuitarisa kubva kumativi ese uye kwete kungo tarisa pane kuyedza kushanda.
Chirongwa Chekudzidza uye Zvinyorwa
Sezvambotaurwa, kwandiri kosi yeECH yaingova yekuvhura ziso zvine chekuita nezvakawanda zvandisingazive. Kuti ndipase bvunzo, ndaiziva kuti ndaifanira kuisa nguva yakawanda nesimba pakuzvidzidzira-kudzidza. Ini ndaifanira kudzidza yakawanda mitsva mitsva.
Sezvo ini ndave kutoshanda nguva yakazara, chero kuzvidzidzira kwaifanirwa kuitwa mushure memaawa ebasa, kazhinji manheru uye pakupera kwevhiki.
Ini ndakatanga yangu yekuzvidzidzira chirongwa kutanga kwaJune 2019 uye ini ndakatanga neLinux Academy's Certified Ethical Hacker (CEH) Perp Course. Iwo anenge maawa makumi matatu nemanomwe emavhidhiyo uye anofukidza ese misoro yeECH v10 Syllabus.
Zvakanditorera inokwana mwedzi miviri kuti ndipfuure ese mavhidhiyo uye marabhabhu.
MunaAugust 2019, ndakatenga Matt Walker's All in One (AIO) CEH bhuku uye yaive yakanakisa kudyara.
Panenge panguva imwe chete iyoyo, ini zvakare ndakabhuka bvunzo yangu, ichaitwa musi wa31 Gumiguru 2019.
Ndakaverenga butiro rebhuku raMat Walker kuvhara kaviri muchikamu chemwedzi miviri. Ini ndakaitawo maekisesaizi kumagumo kwechitsauko chimwe nechimwe uye ndakaedza nezvimwe zvekushandisa.
Ndakarega kuita chero bvunzo dzekudzidzira kudzamara ndave nemavhiki e2 ndisati ndabva pabvunzo chaiyo. Icho chikonzero chiri, ini ndaisada kungotarisa pane mibvunzo bvunzo. Ini ndaida kutanga ndanzwisisa pfungwa uye ndobva ndayedza bvunzo dzekudzidzira.
Pakazosvika pakati paGumiguru, ndanga ndaverenga zvese zvinyorwa kubva mubhuku raMat Walker, ndanga ndaona mavhidhiyo akati wandei uye ndichitora ruzivo kubva kunzvimbo dzakasiyana - Ona Chikamu cheReferensi kumagumo kweichi posvo.
Chaizvoizvo, vhiki mbiri dzekupedzisira pasati pabvunzo chaiyo, ndakaita akawanda ekudzidzira bvunzo uye ndikaverenga zvekare nzvimbo dzandakatambura nadzo.
Yekutanga tsika bvunzo yandakayedza yaive iyo kubva kuLinux Academy. Panyaya yekuoma kwacho, ndingati zvaienderana nemuedzo chaiwo.
Tevere, ini ndakaedza mibvunzo mazana matatu, kuyedza bvunzo, iyo yakauya sechikamu chebhuku raAIO raMat Walker. Ndakaona kuti mibvunzo iri nyore zvishoma pane iyo bvunzo chaiyo.
Pamwe chete nekutora bvunzo, ndakatengawo bhuku raMatt Walker reAIO iro rakazadzwa nemibvunzo yechitsauko chimwe nechimwe chebhuku. Ndakaona iyo mibvunzo kunge yakati omei kupfuura bvunzo chaiyo.
Uye ndakachengeta akanakisa ekupedzisira, iyo Boson Bvunzo Simulator yeECH v10, iyo ine mazana mazana matanhatu emibvunzo yekudzidzira.
Ndakaedza bvunzo dzese ina, imwe neimwe mibvunzo 125. Ndakaona kuti mibvunzo yemubvunzo ingangove yakafanana nedanho rekuoma senge bvunzo chaiyo, kunyangwe vamwe vachipokana kuti zvakati omei.
Chinhu chikuru nezve Bvunzo dzeBoson idzo tsananguro dzakazara dzakapihwa pamubvunzo wega wega. Zvisinei nekuti iwe unowana mubvunzo zvakanaka kana zvisizvo, verenga iwo matsananguriro. Ivo vanodzidzisa kwazvo uye vanouya zvakanyanya kubatsira panguva bvunzo chaiyo.
Yangu yepakati mamakisi kubva kuBoson Bvunzo yaive yakatenderedza 80% mamaki.
Zuva rakatangira bvunzo, ini ndakangotarisana nenzvimbo dzandisina kuwana zvibodzwa zvakanaka pabvunzo dzekudzidzira.
Manheru pamberi pebvunzo ndakaisa zvese kure ndikangotandara kwezuva guru.
Iyo CEH v10 Bvunzo
Iyo bvunzo ndeye 125 yakawanda sarudzo mibvunzo uye iwe unopihwa maawa mana ekupedzisa bvunzo.
Chinhu chekutanga kucherechedza ndechekuti maawa mana ndiyo nzira inopfuura nguva yakakwana yekupedzisa mibvunzo 125. Iwe haufanire kuvhunduka kana kunetseka nezve kupera nguva.
Inenge makumi mashanu kubva muzana yemibvunzo bvunzo, iwe unofanirwa kukwanisa kupindura mune isingasviki makumi matatu masekondi.
Pandakaita bvunzo dzekudzidzira, ndaigona kupedzisa mibvunzo yese zana nemakumi maviri nenomwe mumaawa asingasviki maviri.
Mubvunzo chairo, ndakapedzawo mumaawa maviri, asi ndakapedza maminetsi makumi maviri ndichiongorora mibvunzo nemhinduro.
Kupasa mamaki kweECH v10 chero chinhu kubva 60% kusvika 85% zvinoenderana nedanho rekutambudzika kwemibvunzo.
Ndakapasa bvunzo nezvibodzwa zve 87.2% .
Ndingangoti bvunzo raive rakaoma mupfungwa yekuti paive nemibvunzo yaive nemhinduro dzakafanana. Kune aya marudzi emibvunzo, iwe unofanirwa kuziva kuchengetedzeka zvizere. Zvakare mumibvunzo iyi, kushandisa njere kunowanikwa.
Paive zvakare neboka remibvunzo yakagadzirirwa kukugumburisa, saka chenjera chaizvo pane inoita kunge mhinduro chaiyo. Paunoverenga mubvunzo zvakanyatsonaka uye kuverenga mhinduro zvakanyatsonaka, iwe unogona kazhinji kuona hunyengeri!
Ndakawana bvunzo dzese dzakanangana zvakanyanya pane ruzivo rwekuchengetedza.
Kana zviri zvekushandisa, paive nemibvunzo paNmap syntax, Wireshark, Snort, OpenSSL, Netstat, Hping.
Zvakare mishoma yemibvunzo pane kubiridzira nzira. Zvakare pama scanning nzira, mhando dzechiteshi scan mhando, chiteshi manhamba uye mhinduro dzekudzoka kubva kuvhura uye yakavharwa madoko.
Ini handikwanise kutaura kuti ndeipi nharaunda kana chishandiso chaive chakanyanya kuve nemukurumbira pabvunzo. Mibvunzo yacho yaitaridzika kunge ichibva mukuzara kwese kwese syllabus yeECH v10. Iyo bvunzo bvunzo yakaedzwa pane yega nyaya uye muzviitiko zvakawanda kusvika pakadzika kudzika.
Ndakange ndanyaradzwa pakapedza bvunzo sezvo yaive yekurova pfungwa. Iwe unofanirwa kutarisisa zvakanyanya kuverenga zvakanyanya mubvunzo wega wega mhinduro dzayo zvakadzama.
Sezvambotaurwa, ini ndakawana mimwe mibvunzo yakagadzirirwa kuita hunyengeri, kukuita kuti usarudze mhinduro iri pachena. Zano nderekuverenga mubvunzo wega wega zvakadzama, uye iwe unogona kazhinji kuona hunyengeri.
Mushure mekunge ndapfuura neruzivo rwekufunda uye kutora bvunzo yeECH, ini ndingangoti zvaive zvakakodzera kuita kwacho. Yakandidzidzisa hwakawanda hwaro nezve kuchengetedzeka uye network.
Chinhu chimwe chete nezve kutora bvunzo ndechekuti zvinokumanikidza iwe kuti udzidze uye udzidze izvo zvinhu zvakanaka.
Zvaida kuzvipira kwakawanda uye manheru mazhinji ekunonoka kwekuzvidzidzira-asi ndinofara nezvakabuda.
Kana iwe uchidzidzira bvunzo, ita shuwa kuti uongorore zvese zvirimo muECH v10 syllabus usati waedza iyo yekudzidzira bvunzo. Ita shuwa iwe unonyatsonzwisisa iwo mazano. Uye pakupedzisira ita yakawanda yekudzidzira bvunzo sezvaunogona pamberi peiyo chaiyo bvunzo.
Akasimbiswa Ethical Hacker (CEH)
Matt Walker's CEH v10 Zvese Mune Imwe Yekudzidza Gwaro
Matt Walker's CEH v10 Zvese Mune Imwe Yekudzidzira Bvunzo
Scotty M Craig CEH v10 Chidzidzo Chekutungamira
Mazano brute-F0rce CEH
G0rbe CEH zvinyorwa
Boson CEH Bvunzo Simulator
chinyorwa 3 vs iphone 6 plus
pamusoro pro pa & t
Ivo vachiri kushandisa iyo Samsung Galaxy Cherechedzo 7 vanogona kuve neyekucheresa nguva bhomba
Mafambiro ekuti ungaisa sei manyore Adobe Flash Player pane yako Android kifaa
Kaviri kumanikidza: mashandiro eS Pen chinyoreso cheCherechedzo 4 anoshanda
Apple inoedza kunyengerera vashandisi veApple kuti vachinje neyakavandudzwa Mira kune iOS app
Heano maitiro ekugonesa Adobe Flash rutsigiro mu Android 4.4 KitKat
Zvakanaka, Mifananidzo yeGoogle: Maitiro andakaita kuchinja kune rangu gore rebasa
Kupisa nyowani Apple iPod kubata runyerekupe kunosanganisira zvinokakavara zvinoshandurwa
Apple iPhone 7 uye iPhone 7 Plus hupenyu hwebhatiri
Verizon kutora Samsung Galaxy Note 8 pre-oda kutanga mangwana, Nyamavhuvhu 24